လာရီ ဂျေဂင်၏ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ခရီးစဉ် အပေါ် သုံးသပ်ချက် - Yawnathan News
လာရီ ဂျေဂင်၏ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ခရီးစဉ် အပေါ် သုံးသပ်ချက်
by Hla Soewai - Jan 11 2021
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဝမ်ယီသည် တနင်္လာနေ့တွင် မြန်မာ သို့ နှစ်ရက်ကြာ ခရီးစဉ် အဖြစ်ရောက်ရှိ လာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေသအတွင်း ပြောင်းလဲလာနေသော နိုင်ငံတကာ အနေအထားကြောင့် မြန်မာတွင် တရုတ်ဩဇာအာဏာ ကျဆင်းလာနိုင်သည့် အရေးကို ကျားကန်ဖို့ ရည်ရွယ်ခြင်း ဖြစ်ပုံရပါတယ်။
ဘီဂျင်း အဖို့ စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်စရာ အကြောင်းတွေကလည်း တိုးပွားလာနေပါတယ်။ မကြာမီက အိန္ဒိယ နှင့် ဂျပန်မှ မြန်မာနှင့် ပတ်သက်၍ ဦးဆောင်ဦးရွက် ပြုလုပ်လာနေခဲ့မှုများသည် ဘီဂျင်း အတွက် အကျိုးယုတ်စရာ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ယခု ခရီးစဉ်အတွင်း စီးပွားရေး ဆက်လက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ရှိနေသေးသည် များအား သုံးသပ်ရန်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအား ထောက်ခံမှု ပေးနေကြောင်း ထပ်လောင်းပြသရန် နှင့် ကိုဗစ် အား တိုက်ပွဲဝင်နေသည့် မြန်မာအား တိုးမြှင့်ပံ့ပိုးပေးသွားရန်တို့ကို ရည်ရွယ်ပုံရပါတယ်။
ဒါတွေအားလုံးထဲမှာ အဓိက အကျဆုံး အကြောင်းကတော့ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ မြန်မာအား မိမိတို့မှ မယိမ်းမယိုင် ထောက်ခံမှု ပေးနေကြောင်းနှင့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် သောင်ပြိုကမ်းပြို အနိုင်ရရှိခဲ့မှု ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုစကား ပြောချင်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီအတွက် ရွေးကောက်ပွဲ နောက်ပိုင်း နေပြည်တော်ကို ပထမဆုံး ရောက်ရှိလာတဲ့ ထိပ်တန်း သံတမန်တဦးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
ယခု ခရီးစဉ်ကို အချိန်တို အတွင်း ကပ်ပြီး စီစဉ်ခဲ့ရပုံရပါတယ်၊ ဝမ်ယီ ရဲ့ အာဖရိက ခရီးစဉ် အတွင်း ကြားဖြတ် ဖန်တီးယူခဲ့ရပါတယ်။ မြန်မာဖက်ကတော့ သိုသိုသိပ်သိပ် ပဲ ထားလိုပုံ ရပါတယ်။ ဒါကလည်း ယခု ခရီးစဉ်ကို ဘီဂျင်းရဲ့ “ကာကွယ်ဆေး သံတမန်ထိုးစစ်” လို့ အထင်ခံရမှာ စိုးလို့ ဖြစ်တယ်လို့ နိုင်ငံခြား သံတမန်တွေက ယုံကြည်နေကြပါတယ်။
သို့သော်လည်း နိုင်ငံခြား သံတမန်တွေနဲ့ လေ့လာသူတွေကတော့ ယခုလို တရုတ်ဖက်က စောစောစီးစီး ရောက်လာတာကို အံ့အားတသင့် မဖြစ်ခဲ့ကြဖူးလို့ ဆိုပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ အစိုးရအဖွဲ့သစ် ဖြစ်ပေါ်လာတိုင်း တရုတ်က စောစောစီးစီး ရောက်ရှိလာနေကြလည်း ဖြစ်တယ်လို့ သုံးသပ်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်။
ခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်ကိုတော့ စီစဉ်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝမ်ယီသည် သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ စီးပွားရေး မှာ တာဝန်ရှိတဲ့ ဝန်ကြီး အချို့တို့ကိုလည်း တွေ့ဆုံဖို့ ရှိနေပါတယ်။ စီးပွားရေး နဲ့ ကိုဗစ် ကိစ္စများကို ဦးစားပေး ဆွေးနွေးဖို့ ရှိနေတယ်လို့ သုံးသပ်သူတွေက ယုံကြည်နေကြပါတယ်။
လက်ရှိမှာ တရုတ်-မြန်မာ စီးပွားရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု စင်္ကြန်လမ်းမကြီး အကောင်အထည်ဖေါ်မှုက နှေးကွေးနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီကိစ္စကို ဝမ်ယီကပဲ သူ၏ ၂၀၁၇ နိုဝင်ဘာခရီးစဉ် အတွင်း ပထမဆုံး အလေးအနက် အဆိုပြုခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ စီမံကိန်းများသည် တရုတ်ခေါင်းဆောင်များ၏ ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမ စီမံကိန်းကြီးများအတွက် နဂိုကတည်းက စဉ်းစားခဲ့ပြီး ဖြစ်သော်လည်း ဝမ်ယီက အမျိုးသား ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေး နဲ့ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် လိုအပ်တယ်လို့ ပြောလာခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဝမ်ယီ အဆိုပြုခဲ့တဲ့ တရုတ်-မြန်မာ စီးပွားရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု စင်္ကြန်လမ်းမကြီးမှာ ပါဝင်တဲ့ စီမံကိန်းတွေကတော့ ကျောက်ဖြူ အထူးစီးပွားရေးဇုံ၊ ရှမ်း နှင့် ကချင်ပြည်နယ်များအတွင်း တရုတ်-မြန်မာ စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့် ဇုံနယ်မြေ များ တည်ထောင်ရေး နဲ့ ရန်ကုန် မြို့သစ် တည်ဆောက်ရေး တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဝမ်ယီရဲ့ ခရီးစဉ်ကို ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ် ဇန်နဝါရီ လအတွင်း အလည်အပတ်ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင် ၏ ခရီးစဉ်အတွင်း နေပြည်တော်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းဝင် တရုတ်-မြန်မာ ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲ တနှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ် နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် ယူဆလို့ရပါတယ်။ တရုတ်သမ္မတ တဦး အနေနဲ့ မြန်မာပြည် ကို နှစ်ပေါင်း နှစ်ဆယ်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ရောက်ရှိလာတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံဖက်က အဆိုပါ ခရီးစဉ်အား နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေး အတွက် အရေးပါသော ခြေလှမ်းတရပ် အဖြစ် ယူဆခဲ့ပြီး “တရုတ်-မြန်မာ လူမှု အဖွဲ့အစည်း နှစ်ရပ်၏ တူညီသော အနာဂတ် ရည်မှန်းချက်” အဖြစ် အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
သို့သော်လည်း ထိုခရီးစဉ် နောက်ပိုင်းမှာ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးသည် မျှော်လင့်ထားခဲ့သလို ချောချောမွေ့မွေ့ ဖြစ်မလာတာ တွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာ ဖက်က နိုင်ငံရေးအရ ထောက်ခံမှု၊ စီးပွားရေး အကူအညီ နဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အပိုင်းများမှာ တရုတ်နိုင်ငံကို မှီခိုနေရမှုမှ ရုန်းထွက်ရန် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှု တွေ ပြုလုပ်လာခဲ့လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တဖန် ကိုဗစ်-၁၉ ဖြစ်ပွားလာတာကြောင့် နိုင်ငံခြား ဆက်ဆံရေး မူဝါဒ ဖက်မှာ မသိမသာ ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ဖို့ လိုအပ်လာခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံ နယ်ခြားကို ပိတ်ပြစ်ခဲ့ရသည့်အထိ ဖြစ်လာခဲ့တာကြောင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ် ရေးလည်း ရပ်ဆိုင်းသွားလုနီးနီး အနေအထားကို ဆိုက်ရောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။
မြန်မာဖက်ကလည်း လုံခြုံရေး အရ အကာအကွယ် ယူရန် ပြင်ပအကူအညီ၊ ကုန်သွယ်ရေး နဲ့ စီးပွားရေး မှာ အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့် ပါတနာ ကို ဖြန့်ကျက် ရှာဖွေလာခဲ့ပါတယ်။
တရုတ် သမ္မတရဲ့ ခရီးစဉ်အတွင်း နားလည်မှု စာချွန်လွှာများ အပြင် သဘောတူညီချက် သုံးဒါဇင် နည်းပါး လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပေမယ့် လုပ်ငန်း စတင်ဖို့ နှေးကွေးနေတာကို အခွင့်အရေး ရတိုင်း တွန်းအားပေးသွားဖို့ ကြိုးစားနေခဲ့ပါတယ်။ တရုတ် ကွန်မြူနစ်ပါတီ နိုင်ငံခြားရေး ဗဟိုကော်မတီ အကြီးအကဲ ယန် ဂျီချီ ကလည်း ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလအတွင်း ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံကြောင်းပြသတဲ့ အနေနဲ့ ရောက်ရှိလာခဲ့ရာက အဆိုပါ စီမံကိန်းများ အကောင်အထည် ဖေါ်ရေးကို တိုက်တွန်းသွားခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာဖက်က အချိန်ဆွဲနေတာ ကို သိနေတဲ့ အတွက် အလျှင်အမြန် စတင်နိုင်ဖို့ ကို စိတ်စောနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာဖက်ကတော့ အထူးသတိကြီးစွာ ထားနေတဲ့ အတွက် စီမံကိန်း တခုတလေမျှပင် အကောင်အထည် ဖေါ်တဲ့ အဆင့်ကို ရောက်မလာသေးတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကလည်း မြန်မဖက်က ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိရေး နဲ့ အခြေခံ အဆောက်အအုံပိုင်းဆိုင်ရာ စီမံကိန်း ရဲ့ ရိုက်ခတ်နိုင်မှုအတိုင်းအတာတွေကို ဒေသခံတွေ နဲ့ တိုင်ပင်ရဦးမှာကြောင့်လည်း ဖြစ်ပြီး တရုတ်ဖက်ကတော့ စိတ်မရှည် ဖြစ်လာနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အရေးပါတဲ့ နိုင်ငံရေး ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးမှုတွေလည်း ပြုလုပ်သွားဖို့ ရှိနေပါတယ်။ လက်ရှိမှာ ဂျပန်က နောက်ကွယ်ကနေ မြန်မာ အစိုးရကို အားတက်သရော နဲ့ နည်းပညာ ပိုင်းဆိုင်ရာ အကူအညီတွေ ပေးနေပါတယ်။ မကြာသေးမီကလည်း ပြဿနာ ဖြစ်နေတဲ့ ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာ စိတ်အားထက်သန်စွာ နဲ့ ပါဝင်ပတ်သက်လာခဲ့ပါတယ်။ နိုဝင်ဘာလအတွင်း ဂျပန် အထူးသံတမန်ရဲ့ ကြားဝင် စေ့စပ်ပေးမှု ကြောင့် မြန်မာ တပ်မတော် နဲ့ အေအေ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အကြား ဆွေးနွေးပွဲတွေ ပြုလုပ်လာနိုင်ခဲ့တဲ့ အတွက် အလွတ် သဘော အပြစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဖမ်းဆီးခံ ထားရတဲ့ NLD အမတ် သုံးဦး ကို ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အပြင် ၎င်းတို့ ဒေသများအတွင်း ရွေးကောက်ပွဲတွေ ကျင်းပဖို့ ခွင့်ပြုလာခဲ့ပါတယ်။
ဘီဂျင်းသည် ကူမင်းတွင် အေအေ ဆက်သွယ်ရေး ရုံး ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုထားတဲ့အထိ ပိုမိုနီးစပ်တဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေ ရှိနေတာကြောင့် ဝမ်ယီ အနေနဲ့ ၎င်းတို့ဖက်က သဘောထားကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ စစ်တပ်ကို အသိပေးဖို့ ရှိနေပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ဂျပန်ရဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး ဖန်တီးရှင် အဖြစ် ဖေါ်ဆောင်လာနေတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို ကျွဲမြီးတို ကောင်း တိုနေမယ့် သဘောလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။
တရုတ်အဖို့ နောက်ထပ် စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်လာရတာ တခုက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစိုးရကို နယူးဒေလီ ကနေ အတင်း သူတို့ဖက် ပါအောင် ဆွဲဆောင်လာနေတဲ့ အရေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးမီက မြန်မာ စစ်တပ်မှ ရုရှားလုပ် ရေငုပ်သင်္ဘော ကို အိန္ဒိယမှ ရရှိခဲ့ခြင်းသည် ၎င်းတို့အတွက် မည်သည့်ပြဿနာ မှ မရှိပေမယ့် မြန်မာမှ သိသိသာသာ အနောက်ကို ယိမ်းတဲ့ သဘောကို ယေဘုယျ ထင်ဟပ်စေပါတယ်။
အထူးသဖြင့် မြန်မာစစ်တပ်က တရုတ် စစ်လက်နက် ပစ္စည်းတွေထက် အိန္ဒိယ နဲ့ ရုရှား လုပ် ပစ္စည်းတွေကို ဝယ်ယူဖို့ အားသန်နေတဲ့ သဘောကို ပြဆိုနေတဲ့ အပြင် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးအတွက် အိန္ဒိယဖက် ဦးလှည့်သွားခဲ့တာကလည်း တရုတ်အဖို့ နောက်ထပ် အနာကို ဆားသိပ်တဲ့ လုပ်ရပ်အဖြစ် ခံစားခဲ့ကြ ရပြန်ပါတယ်။
အစိုးရ အတွင်း သတင်းများအရ ကတော့ ကာကွယ်ဆေးအတွက် အိန္ဒိယ၊ ရုရှား၊ ဗြိတိန် နဲ့ တရုတ် အပါအဝင် နေရာအတော်များများတို့မှ ရယူမယ်လို့ ပြောဆိုနေမှုတွေ ရှိနေပါတယ်။
ဝမ်ယီ ရဲ့ ခရီးစဉ်အတွင်း အဓိက ထွက်ပေါ်လာမယ့် အကြောင်းကတော့ တရုတ် ကာကွယ်ဆေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သဘောတူညီချက်ကို ကြေညာဖို့ ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ကွယ်မှာတော့ စီးပွားရေး စီမံကိန်းများ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ရခိုင် နဲ့ အခြား လုံခြုံရေး ကိစ္စများကတော့ အတော်လေးကို အခြေအတင် ပြောဆို ဆွေးနွေးရဖို့ ရှိနေပါတယ်။
(ဘန်ကောက်ပို့စ် ပါ လာရီဂျေဂင်၏ “China seeks to shore up its influence in Myanmar” ဆောင်းပါးမှ ကောက်နှုတ် တင်ပြထားပါသည်)
Papua New Guinea is the most linguistically diverse country in the world with over 850 languages spoken.
Myanmar and World News presented by Hla Soe Wai and Yawnathan Friends
Reveal the info, bring the truth, storm the brain and make things better
: https://www.facebook.com/ynt.online : +1 403-681-2706 : 179, Rundlehorn Crescent NE, Calgary T1Y1C5.
Copyright © Yawnathan News 2021
Visitor Counter : 367061